Eyona studio enexabiso eliphezulu ngeNetflix
Kecamatan Lowokwaru, Jawa Timur, Indonesia
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguSadrah
Indawo ye studio kwindawo enobuchule eMalang. Ifakwe kufutshane e-Uni Muhammadiyah Malang, e-Uni Negeri Malang kunye ne-Uni Brawijaya, le ilungele abafundi kunye nezifundiswa. Le ikwindlela enkulu eya eBatu, eyona ndawo inomtsalane kubakhenkethi eMpuma Java. Ngoko ke, ifanelekile kubakhenkethi. Oku kunombono omangalisayo weNtaba yeArjuno. Inekhitshi, isofa epholileyo kunye nebhedi enkulu kwaye ibonelela ngeendwendwe ezi-3. Inamachibi amabini (inenekazi kunye ne-gent), indawo yokuzivocavoca, ibala le-futsal, i-minimarket kunye nevenkile yekofu. Isaphulelo sokuhlala ngaphezulu kweveki!
Inekhitshi esebenza ngokupheleleyo kunye nefriji encinci kunye nesitovu. Igumbi lokuhlambela linesifudumezi samanzi esinezixhobo zesepha, ishampu kunye neetawuli. Inendawo eninzi yokugcina. Ikumgangatho we-19 kwaye inebalcony eneembono ze-180 degree zeNtaba iArjuno kunye neNtaba iBromo-Semeru. Ine-Wifi, i-Smart TV (i-Netflix, i-Youtube, i-Vidio). Ine-bunkbed, kunye ne-120 cm ububanzi. Unokulala 2 omdala kwaye kunokwenzeka ukuzisa abantwana abancinci.
Umamkeli-ndwendwe unokuqhagamshelwana neendwendwe ngomnxeba nangomyalezo
5.0 ·Izimvo eziyi-10
5.0 · Izimvo eziyi-10
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi10
I-Apartment ifumaneka ngokulula kwiMalang City kunye neBatu City. Ukuhamba umgama ukuya kwindawo yokutyela, iMinimart, i-ATM, iCafe, iNkonzo yokuhlamba impahla. Unogada weeyure ezingama-24 kunye neCCTV.
Umbuki zindwendwe ngu- Sadrah
Ujoyine nge- 2014 Okthoba
Me and my family like to visit new places and have new friends. I live in Malang, East Java, Indonesia.
Umamkeli-ndwendwe unokuqhagamshelwana neendwendwe ngomnxeba nangomyalezo.
Iilwimi: English, Bahasa Indonesia
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Lowokwaru